पर्यटन खबर – Page4– rastriyakhabar.com
विश्वकै १० घुम्नलायक शहरहरु
काठमाडौं– निरन्तरको काम र व्यस्त जीवनशैलीबाट मुक्ति पाउनका लागि घुमफिर र नयाँ नयाँ स्थानमा जानु उपयुक्त हुन्छ । तनावबाट मुक्ति पाउनका लागि पछिल्लो समय घुमफिर गर्ने संस्कृतिको विकास नेपालमा पनि भइरहेको छ । लामो विदाको समयमा वा व्यस्त दैनिकीका बीचमा पनि थकानबाट मुक्ति पाउनका लागि विभिन्न स्थानको..
शुक्रबार, कार्तिक २९, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । देशभरका सार्वजनिक यातयातका साधानमा नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० अभियानको लोगो राखिने भएको छ । भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारीरुपमा प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घबीच भएको समझदारीअनुरुप सो अभियानको..
७१ वर्षीया वृद्धाको प्याराग्लाइडिङ्ग सामाजिक सञ्जालमा भाइरल !
प्याराग्लाइडिङ्ग भन्ने बित्तिकै हतपत धेरै मानिसले आँट गर्दैनन् । अझ बालबालिका वा वृद्ध उमेरका मानिसले यसको कल्पना समेत गर्न सक्दैनन् । हजारौ फिटको उचाईमा उड्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तर विश्वमा केही यस्ता मानिस पनि छन्, जसले उमेर वा शारीरीक बनावटलाई हवाला दिदै चुनौतीको सामना गर्दछन् । भारतमा..
माछापुच्छ्रे पदयात्रा मार्ग– १० वटा हिमालको दृश्यावलोकन
पोखरा । पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेपनि आवश्यक पूर्वाधार तथा प्रवद्र्धन नहुँदा पछाडि परेको ‘माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक’मा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय जुटेका छन् । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–९ को कुइवाङबाट शुरु हुने सो पदयात्रा मार्ग तीनदेखि सात दिनको रहेको छ । कुइवाङबाट सैतीघट्ट,..
दोलखामा एक स्पेनी नागरिकको मत्यु
दोलखा । दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ मा एक स्पेनी नागरिकको मृत्यु भएको छ । रोल्वालिङ हिमश्रृङ्खलाअन्तर्गतको छिकिमागो हिमाल आरोहणका लागि गएका ४४ वर्षीय लुइस फिलिप भल्भर्दी गुजम्यानको हिउँमा चिप्लिएर मृत्यु भएको हो । सो घटनामा अर्का स्पेनी नागरिक डेभिड सुइला फर्नान्डिज घाइते भएको जिल्ला..
दशैं विदामा घुमफिर – कहाँ जाने, कति लाग्छ खर्च ?
शनिबार, अशोज १८, २०७६ मा प्रकाशित
नेपालीहरुको घुम्ने प्रवृत्ति बढेसँगै विभिन्न टुर एण्ड ट्राभल्स कम्पनीहरुले पनि उनीहरुलाई बजेट सुहाउँदो प्याकेजहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अझ केही वर्षयता अन्य समयमा भन्दा दशैंतिहार का समयमा त्यस्ता प्याकेजहरु अफरसहित आउने गर्छन् । दशैं र तिहारको बीचमा स्कुल, क्याम्पसजस्ता शैक्षिक संस्थाहरु..
सोमवार, अशोज १३, २०७६ मा प्रकाशित
द्वपरयुगको अन्त्यमा कनकमुनि बुद्ध र उनका शिष्यहरु तत्कालिन कालि दह (काठमाडौं रहेको स्थान) को उत्तर तर्फ रहेको (नार्गजुन डाँडा) नगरचे डाँडामा बसेर तपस्यामा लिन भएको अवस्थामा डाँडाको सिरो भागमा रहेको स्थानबाट कमलका पातहरु टिप्दै कालि दहमा फ्याँक्दै गर्दा एक हजार कमलका पातहरु फ्याँकेपछि त्यसवाट..
भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी २० पर्यटकीय बस सञ्चालन
शुक्रबार, अशोज १०, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानलाई लक्ष्य गर्दै पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रवर्धनात्मक गतिविधि प्रभावकारी रुपमा अघि बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा ‘स्विफ्ट होलिडेज’ कम्पनीले पर्यटकका लागि आरामदायी..
बाग्लुङ पञ्चकोट– दर्जन बढी हिमशृङ्खलाहरु अवलोकन गर्न पाइने मनोरम स्थल
बिहिबार, अशोज ९, २०७६ मा प्रकाशित
बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–६ स्थित धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य विश्व शान्ति सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटको अवलोकन गर्ने आन्तरिक पर्यटकको वृद्धि भएको छ । पञ्चकोटमा रहेका धर्मिक संरचनाको अवलोकनका लागि दैनिक सर्वसाधरणको बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको छ । शनिवार र बिदाको दिन घुँइचो हुने गरेको छ । पञ्चकोट..
मङ्लबार, अशोज ७, २०७६ मा प्रकाशित
चितवन । साउन महिनादेखि क्रमशः बढेको डेङ्गुको सङ्क्रमणका कारण यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत असर परेको छ । सङ्क्रमणका कारण भरतपुर र आसपासका पर्यटकीय होटलमा पनि पर्यटकको चहलपहल कम भएको छ । भदौ १५ गतेपछि सौराहामा पर्यटकको आगमन बढ्ने गरेकामा यस वर्ष भने न्यून सङ्ख्यामा आएका छन् । चितवनस्थित..
सिन्धुपाल्चोकमा चीनको ‘ग्रेटवाल ’जस्तै ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’
सोमवार, अशोज ६, २०७६ मा प्रकाशित
सिन्धुपाल्चोक । नेपाल सरकारको पर्यटकीय दृष्टिले १०० गन्तव्यभित्र पर्न सफल सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न हेलम्बुमा विभिन्न विकास निमार्णका साथै पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने काम गरिरहेको छ । हयोल्मो संस्कृति झल्कने आकर्षक एकीकृत बस्ती, हेलम्बुको स्याउ र राष्ट्रिय..
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको पाँचपोखरी । समुन्द्री सतहबाट चार हजार २०० मिटरको उचाइमा रहेको यो पोखरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्ने एक सुन्दर गन्तव्य हो । राजधानी काठमाण्डौको सबैभन्दा नजिक रहेको दोर्जे ल्हक्पा र जुगल हिमालको काखमा..
काठमाडौं । पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रका युवायुवती शहरभन्दा केही परको क्षेत्र घुम्न जाँने प्रचलन बढेको छ । विदा वा फुर्सदको समयमा हाइकिङ जाने संस्कृतिमा विकास भएको हो । शहरको धुँवा, धुलो र ट्राफिक जामबाट दिक्क भइरहँदा शरीर र मतिस्क दुवैलाइ रिफ्रेस बनाउनकै लागि पनि धेरैजसो युवाहरु हाइकिङ जाने गर्छन्..
निगमको जहाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले ज्येष्ठ नागरिकलाई आधा भाडा छुट दिने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रिय ध्वजावाकले उक्त घोषणा कार्यान्वयन गरेको जानकारी मिश्रले दिए । मिश्रका अनुसार निगमको जहाजमा दसैं बुकिङ खुला भइसकेको छ । चाडपर्वमा हवाई भाडामा सहुलियत, मन्त्री भन्छन्–ज्येष्ठ..
एक एनआरएनले एक विदेशी साथी नेपाल पठाउनुस् : मन्त्री भट्टराई
सोमवार, भदौ ३०, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ लाई सफल बनाउन गैरआवासीय नेपाली संघमा आवद्ध सबै नागरिकलाई एक जना विदेशी साथीलाई नेपाल पठाउन आह्वान गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ लाई सफल बनाउन गैरआवासीय नेपाली संघमा आवद्ध सबै नागरिकलाई..